Impi Yokuzivikela Yabantu EMyanmar: Isimemezelo Esisemthethweni
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseMyanmar » Impi Yokuzivikela Yabantu EMyanmar: Isimemezelo Esisemthethweni
Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba zaseMyanmar • Izindaba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
IMyanmar imemezela impi
Imizamo yamanxusa eMyanmar (eBurma) yokuqeda ukuthathwa kwamasosha nesiyaluyalu ihlulekile, yize kube nezijeziso ezivela emazweni aseNtshonalanga kanye nengcindezi yomakhelwane baseNingizimu-mpumalanga ye-Asia.
Namuhla "Impi Yabantu Yokuzivikela" yamenyezelwa nguHulumeni Wobumbano Kazwelonke waseMyanmar.
Uhulumeni Kazwelonke Kazwelonke Wobumbano (NUG) umemezele ukwethulwa kwempi yokuzivikela yabantu yokulwa nomkhandlu wezempi ezweni lonke ngoLwesibili ekuseni.
Umongameli obambile we-NUG kaDuwa Lashi La unxuse izakhamizi zezwe lonke ukuthi "zivukele umbuso wamaphekula amasosha aholwa ngu [mholi wamaketula] uMin Aung Hlaing kuzo zonke izingxenye zezwe."
Umemezele iState of Emergency ezweni ukuqeda ubushiqela bamasosha.
Uhulumeni wasethunzini waseMyanmar umemezele "impi yabantu yokuzivikela" emelene nombutho wezempi wezwe, owathatha amandla ngokuvukela umbuso ngoFebhuwari 1.
UDuwa Lashi La, obambe isikhundla sokuba ngumengameli weNational Unity Government (NUG), obunjwe yizishayamthetho ezisuswe esikhundleni, wenze lesi simemezelo kwividiyo efakwe kuFacebook ngoLwesibili.
Ubize lo mholi wamasosha ngobushokobezi ngesikhathi ehlanganisa iPeoples Defence Force.
Ngokuzibophezela ukuvikela impilo nezakhiwo zabantu, uHulumeni Wobumbano Kuzwelonke… wethule impi yabantu yokuzivikela ngokumelene nomkhandlu wezempi, ”kusho yena.
"Njengoba lokhu kunguquko yomphakathi, zonke izakhamizi kulo lonke elaseMyanmar, zivukela umbuso wamaphekula ezempi aholwa nguMin Aung Hlaing kuzo zonke izingxenye zezwe."
IMyanmar ibinosizi selokhu kuketulwa kombuso okwakuholwa ngu-Senior General Ming Aung Hlaing. Ukubanjwa kwamandla kukhuthaze imibhikisho esabalele nenhlangano yokungalaleli komphakathi, kepha abezokuphepha bahlasela ngamandla, babulala amakhulu babopha izinkulungwane zabantu.